Furitaanka xarunta cusub ee Fondazione Prada ee Milan
Mid ka mid ah maalmahaas ka mid ah Milan oo ah meel banaan oo muuqaal ah, oo loogu talagalay qaab loogu talagalay waxqabadyo fara badan Fondazione Prada ee fanka iyo farshaxanka ayaa furi doona. Xarunta cusub ee aasaaska iyo qorshayaasha la xidhiidha furitaankeeda, ayaa shalay ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Patricio Bertelli iyo Miuccia Prada.
Guriga Prada ee maanta ayaa lala xiriiriyaa oo keliya moodal - mashaariic calaamadeyn badan oo la xiriira farshaxanka waxaa lagu qancay sanduuq gaar ah Fondazione Prada. Sanad walba bandhigyo kala duwan, mashaariic filim ah ayaa la qabtaa, caawimaadyada farshaxanada yaryar, sculptors, dhismayaasha ayaa la fuliyaa.
Sannadkan, Ururka Prada wuxuu u dabaal-dagaa sannad-guuradiisa 20-aad, iyo xarun cusub oo ku taala qaybta koonfureed ee Milan, waxay noqon doontaa hadiyad shucuur ah sannad-guuradii. Tani maaha wax ka badan ama aan ka yareyn toban dhismo - toddoba ka mid ah ayaa laga soo iibsaday dukaamada alwaaxa 1916, saddexna waxaa loo dhisay si waafaqsan naqshadeynta dhismaha xafiiska dhismaha OMA, oo ay maamulaan Rem Kolkhas. Waxaa jiri doona hoolal bandhig, xarun carruurta ah, makhaayad, maktabad, shineemo, taas oo ay ka muuqato documentiga ku saabsan maamulaha caanka ah ee Roman Polanski oo marka hore la muujin doono.
Maajo 9, bandhiggu wuxuu furi doonaa dhismaha cusub Fondazione Prada. Gaar ahaan, martida xarunta waa mid ka mid ah booqashooyinka Serial Classic, oo u heellanaa farshaxanka casriga ah, arrinka asalka iyo nuqullada, ku haboonaantu kuma dhicin taariikhda farshaxanka. Dabcan, derbiyada xaruntan cusub waxaa jira meel u ah Majaajilada Madadaalada - labadaba dhinaca taariikhda iyo aragtida, iyo marka la eego ururin cusub, fikrado iyo aragtiyo.
Xarunta wax iibsiga "Crocus City Mall" ayaa furay xaflad ka dhacday Roberto Cavalli
Tusaale-beddelaha Andrea Pežić wuxuu ahaa wejiga koorsada qurxinta wuxuuna u muuqday Vogue legendary
Jaakadaha dumarka, dayrta-jiilaalka 2009-2010
Ulyana Sergeenko ayaa noqday garsooraha rasmiga ah ee todobaadkii Fashion Week ee Paris
Xiliga guga 2008
Maareynta Fiktooriya Fiktooriya waxay soo sheegtey qaar ka mid ah faahfaahinta bandhig caanka ah ee sannadka 2015
Talaalka looga hortago caabuqa pneumococcal ee carruurta
Gabdhaha loo yaqaan 'Ruslana Lyzhichko'
Salad leh naas digaag leh
Tababarka soo-galinta: Caruurta Caruurta ee Waldorf
Dharka, dharka 2012
Hilib doofaarka ka yar bakeeriyada lafaha
Cilmi-nafsiga carruurta iyo sawirrada
Cheburex leh buuxinta kalluunka
Latkes ee baradho iyo karootada
Ilaa intee in la ilaaliyo quruxda iyo dhalinyarada
Caawinaadda ugu wanaagsan ee gaabis ah xilliga dayrta
Alain Vodonayev ayaa lagu tuhunsan yahay in uu xiriir la leeyahay Kurban Omarov
Cudurada hargabka ee lafaha miskaha
Jimicsiyada lagu xoojiyo muruqyada hoosta haweenka
Sidee ninku u dhaqmaa ka dib dhalashada naagtiisa?